Politikan'ny tsena - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Politika fiarovana ny faritra
Ho an'ny tsenan'ny fitaovana am-baravarana, marobe italiana maro no mandeha ho an'ny vokatra avo lenta amin'ny kalitao sy ny vidiny. Na izany aza tsy ny mpanjifa rehetra no afaka manaiky vidiny lafo toa izany. Noho izany, YALIS dia safidinao miaraka amin'ny vokatra avo lenta fa ny vidiny ambany kokoa raha oharina amin'ny tsenan'ny fitaovana eoropeana vita amin'ny varavarana. Rehefa manangana fifandraisana fiaraha-miasa amin'ny YALIS izahay dia miaro ny tsenanay eo an-toerana. Ny orinasanao dia fantatra amin'ny maha YALIS mpizara ao amin'ny toeranao.
Ny YALIS dia miara-miasa akaiky amin'ireo mpaninjara anay hanome serivisy manam-pahaizana amin'ny famolavolana vokatra namboarina, fampiroboroboana ny marika ary ny fampandrosoana ny orinasa. Miorina amin'ny tsena eo an-toerana, YALIS dia manome drafitra azo ampiharina ho an'ireo mpaninjara anay hahafahan'izy ireo mivarotra am-pilaminana ny entana amin'ny mpanjifany. Ny paikady ankapobeny amin'ny tontonana fandraharahana dia ny manampy amin'ny làlana ho an'ny fiaraha-miasa amin'ny ho avy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho tombontsoan'ny orinasa sy ny sampana.
Politika fiarovana ny vokatra
Ho an'ny vokatra namboarina dia miaro ny vokatrao manokana ny YALIS. Miaro ny vokatrao izahay amin'ny fifaninanana sy tokana eo amin'ny tsena, tsy hivarotra ny vokatrao amin'ny mpanjifa hafa izahay.
1. Fanohanana fampiroboroboana: Manamboatra ny vahaolana tany am-boalohany izay mifanentana amin'ny filan'ny mpanjifanay manokana izahay. Manome ny varotra fitaovana sy fitaovana ho an'ny fampiroboroboana anao. Toy ny fampisehoana dokam-barotra, tabilao fampirantiana, arimoara, brochure sns.
2. Famolavolana efitrano fampirantiana sy fampirantiana: Faly i YALIS manome endrika haingo fampirantiana fampirantiana / fampirantiana ary vahaolana ho an'ny solontenantsika / mpaninjara. Amin'ny alàlan'ny fifandraisana lalina sy ny fahazoana ny takiana avy amin'ny mpanjifanay, efitrano fampirantiana mahafa-po natolotra anao.
3. Manohana ny vokatra vaovao: ny vokatra vaovao dia hasandratra amin'ny maso ivoho / mpaninjara mialoha, izay mahatonga anao hahatsapa ny fifaliana amin'ny maha VIP anao, hafa noho ny asa.
1. Miaraka amin'ny fantsom-pifandraisana sasany hizarana ireo vokatra momba ny fitaovana eo amin'ny tsena eo an-toerana, miaraka amin'ny varotra / magazay / tambajotra mifandraika amin'izany;
2. Mpiasa / mpaninjara marika;
3. Mahaleo tena amin'ny tsena eo an-toerana: miaraka amin'ny ekipa mivarotra, mividy, mivarotra azy; trano fanatobiana entana; afaka mamita irery ny asa marketing sy fampiroboroboana;
4. Mpiasam-paritra YALIS: za-draharaha amin'ny fitaovam-pananganana / indostrian'ny fitaovana, fanekena avo sy fahatakarana ny paikadin'ny marika YALIS.